Xinhua Myanmar - ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် COVID-19 လူနာသစ် ၁၇ ဦးတွေ့ရှိ ၊ စုစုပေါင်း ၅၃၃ ဦးထိရှိလာ
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် COVID-19 လူနာသစ် ၁၇ ဦးတွေ့ရှိ ၊ စုစုပေါင်း ၅၃၃ ဦးထိရှိလာ
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့တွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စာသင်ကျောင်းပြန်တက်နေသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) WORLD
ဖနွမ်းပင်၊ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်က COVID-19 ရောဂါ အတည်ပြုလူနာသစ် ၁၇ ဦးတွေ့ရှိခဲ့ရာ နိုင်ငံအတွင်း အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၅၃၃ ဦးထိ ရောက်ရှိလာကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန(MoH) က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အတည်ပြုလူနာသစ်များအနက် ၁၅ ဦးမှာ ဖနွမ်းပင်မြို့မှ ပြည်တွင်းကူးစက်သူများဖြစ်ပြီး ကျန်နှစ်ဦးမှာ နိုင်ငံခြားမှ ဝင်ရောက်လာသော ကူးစက်သူများဖြစ်ကြောင်း ၊ အဆိုပါ လူနာသစ်များကို COVID-19 ကုသရေး သတ်မှတ် ဆေးရုံများတွင် ဆေးဝါးကုသမှုပေးထားကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန် နှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Or Vandine က ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်လာသော ကူးစက်မှု နှစ်ခုအနက် တစ်ခုမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ ပြန်လာသော အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ် ကမ္ဘောဒီးယား အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်က ဝင်ရောက်လာသော အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် ချက်နိုင်ငံသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
အဆိုပါ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လာသော ကမ္ဘောဒီးယားအမျိုးသားသည် ၎င်းပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ဗိုင်းရပ်စ် စမ်းသပ် စစ်ဆေးစဉ် Positive ရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ချက်နိုင်ငံသူအမျိုးသမီးမှာမူ ဒုတိယအကြိမ်စမ်းသပ်မှုမှသာ Positive ရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် လက်ရှိအချိန်ထိ COVID-19 ရောဂါ အတည်ပြုလူနာပေါင်း ၅၃၃ ဦးရှိပြီး ၎င်းတို့အနက် ၄၇၃ ဦးမှာ ရောဂါပြန်လည်သက်သာကောင်းမွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့် သေဆုံးသူ လုံးဝ မရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Cambodia reports 17 new COVID-19 cases, total at 533
PHNOM PENH, Feb. 21 (Xinhua) -- Cambodia confirmed 17 new COVID-19 cases on Sunday, bringing the total number of infections in the kingdom to 533, the Ministry of Health (MoH) said inastatement.
The new infections included 15 locally-transmitted cases in the capital Phnom Penh and two imported cases, the statement said, adding that the new patients were undergoing treatment at various designated COVID-19 hospitals.
MoH's secretary of state and spokeswoman Or Vandine said the imported cases were found ona47-year-old Cambodian man returning from Thailand on Feb. 18 anda43-year-old Czech woman coming from the Czech Republic on Feb. 7.
The Cambodian man tested positive for the virus upon his arrival, while the Czech woman was found positive for the virus in her second test, she said.
The Southeast Asian nation has so far registeredatotal of 533 confirmed COVID-19 cases, with zero deaths and 473 recoveries, Vandine added. Enditem
Students return to school in Phnom Penh, Cambodia, Jan. 11, 2021.
Previous Article Sinovac ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
Next Article အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွမ်ဘိုင်းမြို့တွင် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် လူနေအဆောက်အအုံ (၁,၃၀၀)ကျော် ပိတ်ထားရ